नयां संविधान सभा मधेसको लागि उपयोगी हुने छैन । भाग–२
अबको चुनावमा सत्तालोलुप मधेसी पार्टीहरूलाई दरो सबक मिल्ने अनुमान गरिंदैछ । "सत्ता नही सम्प्रुसत्ता" को नारा दिनेहरू आज फेरी सोही नारा फलाक्दैछन् । मधेसी नेताहरू झुठको खेती गर्दै भन्न थालेका छन् कि, हामीले सबै कुरा त पायौं अब, पहिचान सहितको संघीयता मात्र पाउन बांकी छ । पहिचानयुक्त संघीयता भनेको के हो ? के यिनलाइ थाहा छ ?
नयां संविधान सभा मधेसको लागि उपयोगी हुनेछैन । (भाग–१)
जो निर्वाचनलाई रमाइलोको रूपमा देख्दछन्, तिनीहरू अज्ञानतामा छन् । जसले राजनीतिक जटिलता, राजनीतिक प्रवृति र दिशालाई बुझेका छन्, उनीहरूले जान्दछन् कि अब बन्ने संविधान सभाले परिवर्तनको एजेन्डाहरूलाई अझ समाप्त पार्नेछ । परिवर्तनका एजेन्डाहरू संविधान सभाबाटै समाप्त हुनेछ ।
मधेसले आन्दोलन गरेन भने संसदमा जति नै मधेसीहरु जितेर गएपनि मधेसका मागहरु पूरा गराउन सक्दैनन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरु मधेसका भावनालाई न त हिजो अगाडी ल्याए, न भोलि ल्याउने छन् । जसलाई चुनावमा जानु छ जाउन् । मैले बहिस्कारको कुरा गरेको छैन । तर एउटा दबाबकारी भूमिका निर्वाह गर्न एक दरो संगठनको निर्माण गरौं र संविधानसभा बने पनि पार्टीहरुलाई, राज्यलाई बाध्य गर्ने गरी आन्दोलनको शुरुवात गरौं । मेरो योजना यही हो र म त्यसैमा लागेको छु ।
तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा अपील ।।
मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनुको विकल्प छैन । अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र राज्यसत्ताप्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । यस निम्ति मधेसका क्रान्तिकारी तरूण युवाहरूमा सहभागिता हेतू अपील गदर्छु ।
मैले संयुक्त राष्ट्र मानव अघिकार उच्चायोगलाइ लेखेको पत्र
म सशस्त्र संघर्षका प्रति कहिले पनि विश्वास गरिन् । लोकतन्त्र र शांतिको मार्ग नै मेरो बाटो हो । तर, म निरन्तर राज्य प्रदत षडयन्त्रको शिकार हुदै रहें । भ्रष्टाचारको मुद्दा पछि अहिले फेरी राज्यले अर्को षडयन्त्र थाल्दैछ । सरकारबाट चुहाइएका सूचनाहरूले यसलाइ प्रमाणित गर्दैछ ।
निर्वाचन क्षेत्र आयोगले मधेसीको हकमा स्थापित मान्यताको खिलाफमा काम गर्छ भने राष्ट्रधात हुनेछ ।
समान जनसंख्याको आधारमा क्षेत्रको निर्धारण हुनु पर्दछ–मधेसीको ऐतिहासिक मांग हो । संविधानको आधारभूत मान्यता यही नै हो । यस मान्यता अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भई मधेसीले आफ्नो प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न पाउनु पर्दछ । आयोग स्वयंले यदि विश्वभर प्रचलित मान्यताका विपरित काम गर्दछ वा संविधानले मधेसीको हकमा स्थापित गरेको मान्यताको खिलाफमा काम गर्दछ भने यो राष्ट्रधात हुनेछ । मुलुकको एकताको खिलाफमा आयोगले गरेको कार्य मानिनेछ ।
सर्बोच्च अदालत मेरो मुद्धामा पुर्वाग्रही भयो । यो मुद्धाको फैसला स्वाभाविक नभएर अस्वाभाविक ढङ्गले भएको थियो-जेपी गुप्ता
मुुलुुकका दुइतिहाइ जनताले स्वीकार गरेको मुद्धा अहिले ओझेलमा पारिएको छ । लोकतान्त्रिक मधशीमोर्चाका नेताले पनि विभिन्न खालका सम्झौता गरेर मधेशका जनतालाई अपमान गरेका छन् । मधेशका नेताले मधेशको एजेण्डा छाडे पनि मधेशका जनताले यो एजेण्डा छाडेका छैनन् ।
निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण एक नैसर्गिक अधिकार हो ।
असारमा निर्वाचन नहुने भयो । फेरी पनि हतारमा चुनाव गराउने नाममा संविधान प्रदत्त जनताको अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्न नपाओस । सरकारले अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न सक्छ। यो कार्य सम्पन्न नगरी निर्वाचन हुन सक्दैन ।
मधेसी राजनीतिः मोर्चा "सत्ता समर्पण और मुद्दा विर्सजन" के पथ पर ।
मधेस के उपलब्धीओं को सुरक्षित कर भावी संविधानसभा को उपलब्धीपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना जरूरी हैं । यह कार्य सत्तावादी, समर्पणवादी पक्षों से संभव नही है । अब क्रान्तिकारी मधेसी शक्तिओं का एक सुसंगठित नवीन प्रयास होना वाञ्छनीय हैं । इस कार्य का सम्पादन अब मधेस का दायित्व होना चाहिए । इस हेतू अब एक अभियान को अन्जाम देना होगा ।
जयप्रकाश गुप्तासंग अनन्त अनुरागको अन्तरवार्ता ‘मेरो रिहाइ पछि नयां रूपमा बढने छु ।’
म माओवादी होइन, जस्ले अदालतको अवज्ञा गरेपनि प्रधान न्यायाधिशको स्थायी आमन्त्रण पाउने सौभाग्य पाएको हुन्छ । हामी प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धताकै कारणले अदालतले गरेको अन्यायको शिकार हुनु पर्दछ ।